UBUNGAKANANI BOMNYANGO WEGARAJI ELIMGANGATHO (ONGATSHATANGA, OBINI KUNYE NESIQHELO) - IIGARAJI
Eyona Iigaraji Ubungakanani boMnyango weGaraji eliMgangatho (ongatshatanga, oBini kunye nesiqhelo)
Nasi isikhokelo sethu kubungakanani beminyango yegaraji eyodwa, kabini, iilori, iRV's, iinqwelo zegalufa kunye nokunye.
Ngelixa ezinye iindlela zingaqwalaselwa, abukho ubungakanani obuqhelekileyo bomnyango wegaraji- nanjengoko kungekho bungakanani bukhulu besithuthi okanye igaraji. Ubungakanani kunye nokuma kwegaraji yakho (kunye nezithuthi oceba ukuzigcina) zenza isiqingatha somlinganiso womnyango wegaraji.
Enye into emiselweyo sisitayile kunye nendlela yokuvula yomnyango owukhethayo. Nantsi into ekufuneka uyazi ngaphambi kokuba uthenge umnyango wegaraji entsha. Jonga inqaku lethu ku ubungakanani bemigangatho esemgangathweni Apha.
Ubungakanani beSango elilodwa leGaraji
Umgangatho weGaraji leSango eliqhelekileyo lokuVulwa okungalunganga
Ubungakanani boMnyango weGaraji eliphindwe kabini
Ubungakanani beCango leGaraji eliqhelekileyo
Ubungakanani beGaraji loMnyango weTraki
Ubungakanani beRV yeGaraji
Ubungakanani beMinyango yeGaraji yoRhwebo
Inqwelo yeGalufa iGaraji yoMnyango
Qengqela ubungakanani beGaraji leGaraji
Igaraji yemoto enye ilingana nesithuthi esinye, kwaye ngenxa yoko ifuna ucango olunye kuphela. Owona mlinganiso uqhelekileyo wemoto enye yegaraji yemoto zii-8 ububanzi ububanzi zii-7 iinyawo ubude, okanye i-9 yeenyawo ububanzi zii-7 iinyawo ubude.
Ayinamsebenzi nokuba igaraji iqhotyoshelwe kwesinye isakhiwo okanye ikhutshiwe.
'Ukuvula ngokurhabaxa' libinzana lokwakha, kwaye libhekisa kwindawo esele ishiywe ivulekile / yakhiwe (umzekelo kumnyango okanye ifestile) ngexesha lenkqubo yokwakha. Xa utsala kwigaraji, udlula kwindawo evulekileyo.
Ubungakanani bendawo evulekileyo yokuvula buhambelana nobungakanani bomnyango. Umgangatho omnye umnyango wegaraji ukuvulwa okuqhekezayo kuhlala kune-8 yeenyawo ububanzi nge-7 iinyawo ubude, okanye i-9 yeenyawo ububanzi nge-7 yeenyawo ubude.
Iingcango zegaraji eziphindwe kabini zinobude obuyi-16 yeenyawo kwaye i-7 okanye i-8 yeenyawo ukuphakama. Ukuba unegaraji ezimbini zeemoto, kuya kufuneka uthathe isigqibo phakathi komnyango wegaraji ezimbini kunye neengcango ezimbini zegaraji ezahlulwe yikholamu.
Abanye babanini bamakhaya bathanda ukujonga ngaphandle komthungo komnyango wegaraji ezimbini. Mhlawumbi kwangaphambili, iindleko zomnyango wegaraji ophindwe kabini kunowomnyango omnye. Nangona kunjalo, umnyango ngamnye ufuna owayo Ukuvula ucango lwegaraji , ukutshabalalisa nayiphi na imali enokugcinwa. Funda ngakumbi malunga Iindleko zokwakha igaraji Apha.
Izitayile ezahlukeneyo zeengcango zegaraji zineendawo ezahlukeneyo ezifunekayo. Khumbula ukuba umnyango kufuneka ugcinwe ngaphandle xa uvulekile.
Inani lokugcina elifunekayo (kunye nendawo yogcino) kuxhomekeke kwisitayile somnyango nakwindlela yokuvula. Ukuba unegaraji emile ngendlela engaqhelekanga okanye enobukhulu kwaye ufuna ucango lwegaraji yesiqhelo, kuya kufuneka uthathe imilinganiselo eyongezelelweyo.
Isithuba esiphakathi komphezulu wokuvulwa okurhabaxa kunye nesilingi sibizwa ngokuba yi ‘headroom’. Isithuba esiphakathi kwecala ngalinye lokuvula okurhabaxa kunye nodonga olusondeleyo kubhekiswa kuso njenge ‘gumbi elisecaleni’.
Ukusuka embundwini wegaraji ukuya kudonga lwayo lwangasemva lwaziwa njenge 'backroom'. Uxhobile ngale milinganiselo, ubungakanani besithuthi sakho, kunye nokuphakama nobubanzi kuvulo olukhohlakeleyo, uya kuba ukulungele ukuqhagamshelana nengcali malunga neengcango zegaraji zesiko.
Iingcango zegaraji zesiko ngokubanzi zinobubanzi obuncinci beenyawo ezi-4 kunye nobude obuncinci beenyawo ezi-6. Zifumaneka ngokunyuka kwe-intshi enye kumacala omabini, yonke indlela ukuya kuthi ga kwi-10 yeenyawo ububanzi okanye i-26 yeenyawo ukuphakama.
eyona ndawo yokuthenga izimemo zomtshato
Kule nqanaba, uya kufuna ukuvula ukuvula umnyango wokuthengisa. Nayiphi na enkulu, kwaye ithathwa njengomnyango wegaraji yorhwebo.
Ubungakanani bocango lwegaraji oludingayo elorini aluhambelani kuphela nobungakanani belori kodwa kunye nazo naziphi na iziqhoboshelo okanye izixhobo ozenzileyo.
Itraki encinci ifuna igumbi elingasemva okungenani le-18 yeenyawo, ngelixa ilori enkulu inokufuna i-22 yeenyawo. Ukuba unezibuko ezinkulu okanye izibane zokuzingela, nazo kufuneka zithathelwe ingqalelo.
Izithuthi zolonwabo lutyalomali olukhulu, kwaye kubalulekile ukuzikhusela xa ungekho sendleleni. Igaraji yeRV ubukhulu bayo ngokukhethekileyo ukulungiselela izindlu zamakhaya. Iingcango zegaraji zeRV ngobukhulu ngokukhethekileyo zinobude obuyi-16 yeenyawo kwaye i-8 yeenyawo ukuphakama.
Ukuba unenkxalabo malunga ne-RV yakho yokucoca lo mqobo, ungawujonga nomnyango wegaraji yesiqhelo.
Umama womtshakazi ulungisa iilokhwe
Umgangatho osemgangathweni wentengiso yegaraji yegaraji yokulinganisa iinyawo ezingama-32, ii-intshi ezimbini ububanzi ngeenyawo ezingama-24, 1 intshi ukuphakama. Iingcango zorhwebo ezirhangqwayo zii-30 iinyawo ezi-4 i-intshi ububanzi nge-28 iinyawo, ii-intshi ezine ukuphakama.
Iingcango zegaraji zenqwelo yegalufa zihlala zinobukhulu obune: ezi-5 zii-7 iinyawo, ii-6 zii-7 iinyawo, ii-5 zii-8 iinyawo, kunye nee-6 ezi-8 iinyawo
Kwiindawo apho kusetyenziswa iinqwelo zegalufa endaweni yezithuthi, ezinje ngeeholide kunye noluntu lomhlala phantsi, iigaraji zincinci. Ezi zakhiwo ezinobungakanani bepeyinti zinokusetyenziselwa iitrektara ezincinci okanye izixhobo ezinkulu zokucheba ingca.
Iindawo ezilungileyo zetheko le-bachelorette
Iingcango zegaraji ezisongelayo zihlala zisetyenziswa kuseto lwentengiso, nangona zisetyenziswa nakwindawo zokuhlala. Zingaba zincinci njenge-4 inyawo ngo-7 iinyawo okanye ubukhulu njenge-54 yeenyawo ngo-30 iinyawo.
Iingcango zegaraji ezijikelezayo, okanye 'iingcango ezijikelezayo', njengoko zibizwa njalo ngamanye amaxesha, ngumkhusane wentsimbi osongelwe ngokuthe nkqo ukuveza ukuvulwa okubuhlungu kwegaraji.
Xa ingasetyenziswa, ihlala izisongele ngapha nangapha komnyango. Iingcango zegaraji ezisongelayo sisisombululo esikhulu xa ukuphakama kwegaraji kungumba - azidingi igumbi lentloko elininzi, umzekelo, ipaneli okanye umnyango wegaraji.
Iingcango zegaraji ezisongelayo zithathwa njengezomeleleyo kwaye zikhuselekile kakhulu kwaye ziyafumaneka kubukhulu obubodwa okanye ubukhulu obuphindwe kabini.
Ngokuxhomekeke kwimozulu ohlala kuyo, kunye nento oyigcina kwigaraji yakho, usenokucinga ngomnyango wegaraji efakiweyo.
Umnyango wegaraji yentsimbi umalunga ne-⅛ ubukhulu. Izakugcina ukufuma kunye nabagxeki bangangeni, kodwa ngekhe wenze nantoni na ukunqanda umoya obandayo wasebusika ekubeni ujike igaraji yakho ibe sisiqandisi.
Owona mnyango ungabizi mali ingako une-½ to ½ foam insulation unamathele ngaphakathi kweengcango. Iimodeli ezibiza kakhulu zinegwebu elingqingqwa (1 kuye ku-1½), isangweji phakathi kweepaneli ezimbini.
Okokugqibela, ukuba ucinga ukusebenzisa igaraji yakho njengendawo yokuziqhelanisa nebhendi yakho, umnyango ogqunywe kakuhle uya kusinciphisa isandi ngokwaneleyo ukuze uhlale uhleli kakuhle nabamelwane bakho.
Ukuba ufuna ukwakha isicwangciso sakho segaraji zininzi Isoftware yoyilo lwegaraji iinkqubo ezinokunceda. Ngala ungangenisa umfanekiso wesikwere owufunayo uze ungeze izinto zoyilo kunye nokugqiba.
indlela polish umsesane
watshata nini ixilongo melania?
umdala kangakanani umfazi wexilongo
Ungalitshintsha njani igama lakho kwi-utah
yintoni isikhumbuzo seminyaka engama-40 sitshatile?